Lacagtii Kooxaha Shiinaha Oo Soo Gaadhay Afrika
HomeAfricaLacagtii Kooxaha Shiinaha Oo Soo Gaadhay Afrika
Kooxaha horyaalka waddanka China ee loo yaqaano Chinese Super League oo lacago badan gelinaya ciyaaryahannada dunida oo ay doonayaan in waddankooda ay geeyaan, ayaa usoo jeedsaday inay ciyaaryahannada Afrika iibsadaan.
Suuqa ciyaaraha oo furmay toddobaadkan bilowgiisii, ayaa waxa uu ciyaaryahankii ugu horreeyey ee Afrika ah ee xili ciyaareedkan taga waddankaasi uu ku biiray naadiga Tiangjin TEDA.
Ciyaaryahankan oo ah xiddiga reer Nigeria ee John Mikel Obi oo ay da’diisu tahay 29 jir, 327 ciyaaroodna u saftay Chelsea oo uu u ciyaarayey tan iyo sannadkii 2006, ayaa qalinka ku duugay heshiis uu toddobaadkii ku qaadan doono lacag dhan 140,000 Giniga Ingiriiska ah.
Intii uu joogay Chelsea waxa uu kula guuleystay laba horyaal oo Premier League ah, Afar FA Cup iyo Champions League oo Chelsea kor u qaadday sannadkii 2012.
Obi ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray in inkasta oo aanu hal kulan xili ciyaareedkan u safanin Chelsea uu jeclaa in uu wakhti la siiyo, laakiin cimrigiisu yar yahay oo uu sannado badan oo kale sii ciyaari doono.
Waxa kale oo uu tibaaxay in uu jeclaystay in uu tago horyaal cusub iyo loollan hor leh, waxaanu yidhi: “Maskaxdayda waxa ku jira, dareen ah inaan raadsado loollan cusub. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku biiro Tianjin TEDA FC marka uu horyaalka waddanka China bilaabmo, waxaanan rajaynayaa in aan ka caawin doono Tianjin TEDA FC inay meel sare gaadho.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu dib u milicsaday noloshiisa Ingiriiska iyo ka ciyaarista horyaalka Premier League qiimaha ay ciyaaryahannada ugu fadhido, waxaanu yidhi: “Horyaalka Premier League waa halka uu jecel yahay ciyaaryahan kasta in uu ka ciyaaro, laakiin inaad u ciyaarto Chelsea, ka mid noqoto qoyska Chelsea oo aad la shaqayso tababareyaasha iyo ciyaartooyada dunida ugu wanaagsan, runtii waa sharaf,” ayuu yidhi.
Mikel ayaa noqonaya ciyaaryahankii labaad ee Chelsea ka tirsan ee toddobaad gudihii u wareega horyaalka waddanka China, waxaana ka horreeyey Oscar oo ku biiray Shanghai SIPG.
BENEVENTO VS MILAN 2-2 ALL GOALS & HIGHLIGHTS
Balotelli: Ronaldo Waa In Lagu Ixtiraamo Wixii Uu Qabtay
06/07/2016 Abdiwahab Ahmed
AC Milan vs Torino 0-0 Highlights & Goals – 26 November 2017